Indha-Qarshe: Al shabaab Xabad & Xabsi ayaa u danbaysa, Shacabka yaysan Cabsan – news
Indha-Qarshe: Al shabaab Xabad & Xabsi ayaa u danbaysa, Shacabka yaysan Cabsan
Muqdisho (KON) - Jen. Daahir Aadan Cilmi (Indha Qarshe), Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay Howlgalka socda ee loogu magacdaray "Badweynta Hindiya", kaasi oo Al shabaab looga saarayo dalka oo dhan.
Taliyaha ayaa marka hore uga mahadsaceliyay Ciidanka DFS & kuwa AMISOM Guulaha ay ka gaareen Dagaalka ee ay Kooxda Al shabaab uga saareen Qeybo badan oo kamid ah Gobolada Shabeellaha Hoose, Hiiraan & Galgaduud.
Indha Qarshe wuxuu ugu baaqay Ciidanka inay dhowraan Xuquuqda Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Degmooyinka ay la wareegeen, oo aysan u geysan Dhac & Kufsi oo inta badan lagu eedeeyo Ciidanka.
Dhanka kale, Taliyaha ayaa fariin u diray Dhalinyarada ku jira Kooxda Al shabaab, isagoo ugu baaqay inay ka faa'ideystaan Fursadda Cafiska ah ee DFS u fidisay oo ah Mudo 45 Maalmood inay isku soo dhiibaan.
"Haddii aad ka faa'ideysan waysan Fursaddan ka adiin siiyay, waxaad u danbeyn doontaa Meel xun & Xabsi mana adinka daba harayno waan adiin soo qaban doonaa," ayuu yiri Taliye Indha Qarshe.
Ugu danbeyntii, Taliyaha Ciidanka ayaa ugu baaqay Shacabka inaysan ka baqin Kooxda Al shabaab oo kutilmaamay in hadda ay u dhamaatay Awoodoodii laga baqi jiray, isagoo xusay in haddii Al shabaab awood leeyihiin inay difaacan lahaayeen Degmooyinka laga saarayo.